Madda Walaabuu Press: Hoogganoota moo Hoongayoota? Leaders or Loosers?
Nuti ummanni Oromoos akkumma ummata adunyaa biroo jaarmaya siyaasaas qabnna, jaarmanni siyaasaa kun ammoo hoogganas qaba. Hooganoonni siyaasaa dhaabota keenyaas tarreeffama sadan gubbatti lafa kaayame kana keessaa tokko keessatti yookaan lama keessatti shalagamuu qabu. Garuu kana sadanuu godhuufi yoo hindandeenye jechuun yoo carraa uumuu hindandeenye yookaan carraa uumamutti dhimma bayuu yoo hindandeenye yookaan carraa dhufuu deemu tilmaamamnii ummata qopheessuu yoo hindandeenye Hooganoota jennaan ree?
Arra haalli hoogganoota Oromoo irraa argaa deeminnu kan hedduu abdii nama kutachiisu yoo ta’ellee, qabsoon ummani keenya gootummaan diina dura dhaabbachaa jiranii fi dammaqiinssi isaanii kan abdii nama horachiisu ta’ee muli’ata. Arra carraan guddaan uumamee jira, carraa kana gootonni uumani galata qabu, carraa uumuu yoodadhaban ammoo carraa uumametti dhimma bayuu dadhabuun hooganoota keenyaa maal akka jennuun mata duree kiyyarra filmaanni jira.
Da’immaniifi dubartootaafi mangoddonni oromoo dandii konkolaata irratti rasaasaa wayyaaneetiin gonbifamaa jiran osoo ijaan dawwannuu humnna qabaannee diina irraa rukutuu dadhabinullee akkumma ummanni keenya tokkummaadhaan diina dura dhaabbatetti garaagarummaa lakkifinnee, ufitullummaa keenya liqimisinee, abjuu dhiiga ijoollee kanaatiin anngoo yaabbachuu lakkifinnee, ibsa ejjannoo, guyyaa goototaa fii dhaadannoo tarkaanfiin duuba hinjirre kanaan ufiifi ummata keenyalle sobuu dhiifinnee humnaafi dandeettii keenya walitti dabalannee tokkummaan dhaabbachuu dhabuun keenya hooganoota moo hoongayoota nujechisiisa ree?
Obboleeyyan koo mootummaan wayyaanee diina hiddi isaa gadi fagoo ta’ee jira. Wayyaanonni adunyaa nuti alaa kanaa itti wayiwaachaa jiru kanaafi michuu cimtuudha. Adunyaan arraa kan mirgi ilma namaa fedhii biyyoota guggudoo maqaa (national interest) jedhuun idda bu’ee jira. Warri West ummanni oromoo hundi lafarraa dhumee fedhiin isaanii yoo kan wayyaneen eeggamu ta’e irra hinkaayanne. Guyyaan isaan nudhagayan yoo wayyaaneee daysinee fedhii isaanii dukkaneesinee jenne gaafa san fira nugodhachuufi nudhagayu malee akkanatti nudhagayuufille hindeeeman. Warri West hanga nutti ufi beeyinnu caalaa nubeeku akka nuti jaarmaya cimaa hinqabnne akka nuti hooggana dhugaa murataafi kutataa hinqabne akka hawaasa hinijaaramin taane bareechanii nuhubatu.
Kanaafi obboleeyyan koo carraa tokkochi nuuf hafe hawii fii abjuun xurree adda addaatiin qabsoofinne milkoofinna jedhu dhumatee jira amma carraa tokkochi nuuf hafe qabsaawonni hundumitti qabsoo ummata oromoo geggeesina jennu moora tokkottitti deebinee Hooggana hayyuu, qaroo fii kennaa qabu qabsoo keenyatti horuudhaan qabsoo dhaloota haaraya dhaalichifinnee wareegama jaallan qabsoo irratti wareegamanii itichinee gumaa ijjoollee teenyaa dhumanii akka baafinnu Hoongayoota osoo hinta’in hoogganoota jedhaminnee akka galmee seena irratti kaayaminnu akka tokko taanu isinitti waywaadha.
Galmo Adam December 27, 2015
Daba duraan moora QBO irratti dalagdaniifi qawwee diinatti galchitantu kanaan nu gahe haa tahuu ammallee yeroon hin dabarre haa tokkoomnuu
Waabe December 27, 2015
Hogaootaalle miti, Hunbannootalle miti, Homachoota.